Isifanekiso se-AMP sama-Blogger - Yenza kusebenze i-Google AMP, Kulula! - TO
Isifanekiso samahhala se-Google AMP seBlogger.com - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Yenza kusebenze i-Google AMP ngomaki owodwa we-meta! - Sebenzisa ithempulethi yamahhala ye- Blogger AMP etholakala lapha ukuhlinzeka ngamakhasi we-AMP ahambisana ngokuphelele ne-Google ngokuthunyelwe kwakho kubhulogi.
Lungiselela i- blogger yakho yamadivayisi eselula nabasebenzisi bayo , ngaleyo ndlela iphinde ithuthukise okuthunyelwe kwakho kwendlela ye- Mobile First Index .
Yivivinye manje: faka i-meta tag bese usuqedile!
Faka / yenza kusebenze isifanekiso se-Blogger AMP
Umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo olandelayo ukukhombisa ukuthi ungasifaka kanjani futhi usisebenzise kanjani isifanekiso se-AMP kubhulogi yakho ye-blogger. Ngemuva kokungeza, konke okunye kuhamba ngokuzenzakalela ngemuva - sicela wazi ukuthi injini yokusesha kufanele iqale ibone futhi icubungule umaki we-meta we-AMPHTML emakhasini ngamanye ebhulogi yakho ngaphambi kokuthi izinhlobo ze-AMP zivele emiphumeleni yosesho!
Ngena ngemvume kubhulogi
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Blogger bese uya kudeshibhodi ye-Blogger.
Faka ikhodi yewijethi ye-AMP
Kusuka kudeshibhodi ye-Blogger, hamba uye kule nketho elandelayo:
Isifanekiso -> Hlela i-HTML
Kwikhodi ye-HTML, engeza umaki we-meta olandelayo kwenye indawo <head> :
Gcina bese usuqedile!
Gcina Izinguquko. Isifanekiso se-AMP bese sifakwa futhi sasebenza ku-blog!
Kungani le template ye-AMP?
Lesi sinqunjwana esisemthethweni se-AMP / isifanekiso sama-blogger, esivela ku-amp-cloud.de, senza amakhasi eselula a-Accelerated (AMP) asebenze kubhulogi yakho - ngakho dala amafayela e-AMP athobela i-Google ngaphandle kolunye ulwazi lwe-AMPHTML, ngaphandle kwesikhathi esengeziwe, kalula futhi mahhala. Izinguqulo zokuthunyelwe kwe-blogger yakho, ene-meta tag ye-HTML eyodwa kuphela!